उत्तम सुरुवात | Uttam Babu Shrestha
भागवत भट्टराइ शिलापत्र
विश्‍वभर प्रकृतिले मानव भलाइका लागि दिने सेवा-सुविधाको लेखाजोखा युवा वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठलगायतको टिमबाट गरिएको पछिल्लो अनुसन्धान हो । यो अनुसन्धानको लेख जर्नलमा प्रकाशित हुने क्रममा छ ।
केही समयअघि बहुराष्ट्रका वैज्ञानिकले दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित ज्ञानको उत्पादन र त्यसको विश्लेषण गरे । दिगो विकास लक्ष्यका लागि जैविक विविधता सम्बन्धित विषयमा ३२ देशका वैज्ञानिकका तर्फबाट लेखिएको यो आलेख ‘नेचर सस्टेनिबिलिटी’ जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । जसमा नेपालका उत्तमले काम गरे ।
वैज्ञानिकहरू ‘साइन्स जर्नल’ मा लेख छपाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै ठान्छन् । केही समयअघि मात्रै उत्तमले एक भारतीय युवा वैज्ञानिकसँग मिलेर दक्षिण एसियामा विज्ञान कूटनीतिबारेमा लेखिएको लेख `साइन्स जर्नल´मा सम्पादकीयका रूपमा प्रकाशित भयो ।
युनिभर्सिटी अफ म्यासेचुसेट्सबाट वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि, अमेरिकाको नर्थस्टर्न विश्वविद्यालयबाट भौगोलिक सूचना प्रविधिमा मास्टर्स, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वनस्पतिशास्त्रमा मास्टर्स गरेका हुन्, उत्तमले ।
हार्वर्ड युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ म्यासेचुसेट्स, युनिभर्सिटी अफ मेइन अमेरिकाका साथै टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिख जर्मनीमा विगतमा काम गरे । पछिल्लो ६-७ महिनाअघिसम्म युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्विन्सल्यान्ड, अस्ट्रेलियामा सिनियर रिसर्च फेलोको रूपमा काम गरेका उनी अहिले नेपालमा बसेर आफूलगायतका साथीले स्थापना गरेको अनुसन्धान संस्थामार्फत अनुसन्धानका काम गरिरहेका छन् ।
‘विगतमा विदेश थिएँ, नेपालका विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरेँ, अहिले नेपालमा छु, नेपाललगायत विदेशका विषयमा पनि अनुसन्धान गरिररहेको छु,’ उत्तम भन्छन् ।
नेपाल फर्किएको ६ महिनाको अवधिमा उनीसहितको टिमले वातावरण र जैविक विविधताका विभिन्न विषयमा विश्‍व तथा दक्षिण एसिया केन्द्रित अनुसन्धानको काम गरेको छ, अन्य मुलुकका अनुसन्धान संस्थासँग मिलेर ।
उनी थप्छन्, ‘अन्य मुलुकका धेरै अनुसन्धान संस्थाले नेपालका विविध विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् भने नेपाली अनुसन्धान संस्थाले नेपालबाहेक अन्यत्रका विषयमा सम्भव भएसम्म किन अनुसन्धान नगर्ने ?’
नेपालमा स्थापित तर नेपाल र नेपालबाहिरका विषयमा पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उनको संस्था ‘ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिस्प्लिनरी स्टडिज’ (जीआईआईएस) को एक उद्देश्य हो । माथि उल्लेखित कामहरूबाट पनि उनी र उनको संस्थाकाे उद्देश्‍य मुखरित भएको देखिएको छ ।
हामीले काठमाडौंमा बसेर सम्भव भएसम्म न्युयाेर्कको प्रदूषणका बारेमा किन अध्ययन नगर्ने वा भारतको वन विनाशका अध्ययन किन नगर्ने ? नेपालकै अनुसन्धान संस्थालाई नेपालको भूगाेलबाहिर लान सकिन्छ, यही प्रण गरेर काम अघि बढाएका छाैँ ।
अहिले हाम्रा विश्‍वविद्यालयको अनुसन्धान र प्राय: नेपाली अनुसन्धान संस्थाले नेपालका विषयमा मात्रै केन्द्रित अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अब त्यसलाई फराकिलो बनाउने उनको ध्येय हो ।
‘कम्तीमा साउथ एसियासम्म त फैलिन पर्‍यो, सहकार्य गरेर भए पनि,’ उनी थप्छन्, ‘अमेरिकालगायतका विकसित देशका संस्थाले ग्लोबल लेभलमा रहेर अनुसन्धान गरेको हुन्छ भने हामीले त्यस स्तरमा नसके पनि यहाँ बसेर नजिकका छिमेकी राष्ट्रको अध्ययन गर्न सक्छौँ, ती देशसँग नेपाललाई तुलना गर्न सक्छाैँ ।’
भौगोलिक सिमानाभन्दा बाहिर निस्केर अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा पढ्ने पढाउने अध्येताले नेपालको तामाङ भाषाको विषयमा अध्ययन गरिरहेको हुन्छ, शेर्पाका अनुवंश हेरिरहेकाे हुन्छ । हामीले काठमाडौंमा बसेर सम्भव भएसम्म न्युयाेर्ककाे प्रदूषणका बारेमा किन अध्ययन नगर्ने वा भारतको वन विनाशका अध्ययन किन नगर्ने ? नेपालकै अनुसन्धान संस्थालाई नेपालको भूगाेलबाहिर लान सकिन्छ, यही प्रण गरेर काम अघि बढाएका छन्, उत्तमले ।
अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आउँदै गर्दा नेपालमा पनि कोरोनाको त्रास बढेको थियो । नेपालमा मात्रै होइन, विश्‍वका धेरै शहरमा लकडाउन गरिएको थियो । त्यसै समयमा उनको संस्था जीआईआईएसका अध्येताहरूले विश्वका ४० प्रमुख शहरका वायु प्रदूषणको अवस्थामा लकडाउनले पारेकाे फेरबदलमा अनुसन्धान गर्‍यो । जीआईआईएसका तर्फबाट तीन जना, अस्ट्रेलिया र जर्मनीमा गरी तीन जना अन्य अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता रहेको उक्त अनुसन्धान प्रिप्रिन्टका रूपमा प्रकाशित भयो ।
धूलोका कण, ओजाेन, सल्फरडाइ अक्साइड, कार्वनडाई-अक्साइड, नाइट्रस-अक्साइड गरी छवटा प्रदूषणमा आएका फेरबदल हेरिएको उक्त अनुसन्धान हजाराैँ पटक डाउनलाेड भइसकेको छ । उनका अनुसार सम्भव भएसम्म यी र यस्तै अनुसन्धानका लागि खोलिएको संस्था हो जीआईआईएस ।
जीआईआईएसका निर्देशक तथा अनुसन्धानकर्ता हुन्, उत्तम । हाल यो संस्थामा १६ जना रिसर्च फेलो जोडिएका छन् । यस संस्थालाई नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वसनीय, सान्दर्भिक, वैध अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान संस्था र नेपालभन्दा बाहिरका समस्याका पनि अनुसन्धान गरेर विश्व ज्ञान उत्पादनमा भूमिका खेल्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाउने योजनाअनुसार स्थापना गरिएको उत्तम बताउँछन् ।
अर्को लक्ष्य उत्पादन गरिएको ज्ञानलाई, नीति उपयोगी बनाउने हो । त्यसका लागि समस्याका बहुआयामिक पक्ष बुझ्न र केलाउनु पर्नुका साथै अन्तरविधागत ज्ञानको आवश्‍यकता हुन्छ ।जीआईआईएसमार्फतत्यो खाडललाई पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको उत्तमले बताए ।
जसका लागि नीति निर्माण गर्ने हो, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर समस्यालाई दुवै पक्षले बुझ्दै, नीति निर्माताको आवश्‍यकताको पहिचान गर्दै उनीहरूको विश्वास जित्ने वातावरण बनाएर मात्रै नीतिमा प्रभाव पार्न सकिने अनुसन्धान गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘नीति उपयाेगी ज्ञान अध्येताहरूले मात्रै उत्पादन गर्ने होइन, नीति-निर्माताहरूसँगका सह-डिजाइन, सहउत्पादनबाट हुने हो,’ उनी भन्छन् ।
विकासमा अन्तरविधागत आयाम
कुनै एक विधा वा आयाम केन्द्रित अनुसन्धान भई नै रहे पनि बहुआयामिक विषयमा अध्ययन गर्ने बीचका सहकार्यबाट अन्तरविधागत ज्ञान उत्पादनमा जाेड उत्तमको सोच हो ।
विकासको बहुआयाम पहिल्याउन नसक्दा विनाश निम्त्याएको विषय बुझ्नु आवश्यक छ । जीआईआईएसको अनुसन्धानबाट अन्तरविधागत आयामलाई प्रवेश गराउन खोजिएको उत्तमले बताए ।
‘प्रभावकारी विकासका लागि तीन मुख्य आयाम वातावरणीय आयाम, आर्थिक आयाम र सामाजिक आयामलाई सँगसँगै राखेर त्यसका ट्रेडअफ र सिनर्जी बुझ्न अवश्यक छ,’ उनी थप्छन्, ‘जुन एउटा जटिल प्रक्रिया हो । सहज भएकाे भए त भौतिक विकाससँग अरू समस्याहरू आउँदैन थिए नि !’
विश्व युवा वैज्ञानिक एकेडमीमा आवद्धतापछि नेपालमा ‘नयन’
उत्तम पाँच वर्ष विश्व युवा वैज्ञानिक एकेडमीमा सदस्यका रूपमा विश्वबाट छानिएर आवद्ध भएका थिए । उनीहरूले युवा वैज्ञानिक एकेडमीमार्फत खेल्नुपर्ने र खेलिने भूमिकाको विषयमा बुझे पनि ।
विश्व युवा वैज्ञानिकमा आवद्धताकाे समय सकिएपछि उनीहरूले नेपालमा नेशनल योङ एकेडमी ‘नयन’ को आवश्‍यकता देखे र गठन गर्नका लागि युवा वैज्ञानिकहरूसँग सहकार्य गरे ।
‘म यसको सदस्य हुने छैन । विधानत: नयनमा उमेर हद र आफ्नो करिअरको अवस्थाका कारण म अयाेग्य हुनेछु,’ उत्तम भन्छन्, ‘हालका तदर्थ समितिका सबै सदस्यले सदस्यता आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरू छनोटमा अयोग्य पनि हुन सक्छन् ।’
विश्वका अन्य एकेडमीजस्तै यसका सदस्य प्राज्ञिक तथा वैज्ञानिक उत्कृष्टताका आधारमा मात्रै चयन गरिने व्यवस्था छ । यो बहुविधागत वैज्ञानिकको संस्थाका रूपमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । युवा वैज्ञानिकको आवाजलाई मूर्त रूपमा उठाउने, ज्ञान–विज्ञानको क्षेत्रको विकास गर्ने मुख्य दुई उद्देश्य हुन्, नयनका । जसले गर्ने केही काम निर्धारण पनि गरिएको छ ।
अनेकका संगठन छन् देशमा, एकपल्ट युवा वैज्ञानिकलाई पनि हेराैँ
पहिलो काम भनेको नेपालका युवा वैज्ञानिकको राष्ट्रिय सर्वेक्षण हो । खुला तथ्यांक (ओपन डेटा) सम्बन्धी काम गर्न खोजिएको उत्तमले बताए । अर्को काम, सिनियर एकेडेमीको सदस्य बन्न योग्य वैज्ञानिक तयार पार्ने‍ ।
जुनसुकै शैक्षिक विधाका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिकहरू (प्रकृति विज्ञान, समाज विज्ञान, मानवशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङदेखि कानुनसम्मका) ले यसको सदस्य बन्न आवेदन दिन सक्नेछन् र छानिएर सदस्य बन्न पाउनेछन् ।
एकेडेमीका सदस्यहरूको छनोट आवेदक सदस्यको वैज्ञानिक खोज र प्रकाशनको गुणस्तर, त्यसको प्रभाव साथै उनीहरूले समाजमा गर्न सक्ने योगदानको मूल्यांकनका आधारमा गरिने व्यवस्था छ ।
विदेशको सीमितता कि नेपालको चुनौती ?
उत्तम विदेशमा रहेका अधिकांश साथीले नेपाल अनुभव सुनाउन आग्रह गरिरहेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर साझा उत्तर दिएका छन् ।
अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्तो व्यवस्थित छैन, काठमाडौंमा थुप्रै चुनौती छन् दैनिक जीवन कष्टकर छ । जनतालाई सघाउने होइन यहाँ नियमहरू अविश्वासकाे जगमा बनाइएको छ । पाइलापाइलामा अप्ठ्याराे छ । तर, यी कुरालाई सामना गर्न सक्छु भनेर फर्किएकाले आफूलाई गाह्रो नभएको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो नेपाल फर्काइ विगतमा जर्मनी, अमेरिका अस्ट्रेलिया जाने व्यक्तिगत रहर र रोजाइजस्तै भएको बताएका छन् । कहाँ बस्ने कुरा व्यक्तिगत छनोट पनि हो । नेपाल फर्कने क्रममा उनले विदेशको सीमितता र नेपालमा उपलब्ध अवसरमध्ये एक रोजेको बताउँछन् ।
‘विदेशमा म माथि पुग्दा कुनै युनिभर्सिटीको प्राध्यापकसम्म पक्कै हुन सक्छु भन्ने बुझेँ, एउटा विश्‍वविद्यालयको प्राध्यापक भएर बाँकी जिन्दगी गुजार्ने कि, नेपाल गएर युनिभर्सिटीजस्तो संस्था नै बनाएर नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने ? भन्दै दुईवटा अप्सन मसँग थिए । मैले पछिल्लाे अप्सन रोजेँ ।’
विदेशमा सबै सुविधा भएर पनि सन्तुष्टि नभेटिने, के नभएकाे जस्ताे सधैँ महसुस हुने तर नेपाल सबै भद्रगोल नै रहे पनि सन्तुष्टि मिल्ने, ठीकै छ नि भनेजस्ताे हुने उनको अनुभव छ ।
‘हामी पीएचडी वा मास्टर्स पढ्न जानेहरू २०/२५ वर्षसम्म नेपालमै बसेका हुन्छौँ, त्यसैले नेपालसँगको प्लसटु सकाएर विदेश जाने पुस्तासँग भन्दा बढी हुने रहेछ । उमेरका कारण पनि नेपालप्रतिकाे चासो बढी हुनेरहेछ, जसले मिलेसम्म नेपाल नै फर्कन मन लाग्ने रहेछ ।’
नेपाल फर्कन चाहनेले चुनौतीसँग जुधेर आफ्नो पौरख पोख्छु भन्ने उद्देश्‍य बोक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोकेर आउनु गलत हुने उनको बुझाइ छ ।
फर्कनुभन्दा करिब २ वर्षअघिबाटै ने‍पाल गएपछि के गर्ने भन्ने कम्तीमा पाँचवर्षे योजना बनाइयो भने नेपालकाे सुरुवाती बसाइ सहज हुने उनी सुझाउँछन् । नेपाल आउनुअघि आफ्नाे याेजनाबारे उनले भने, ‘म स्पष्ट थिएँ । पाँच वर्षसम्म जागिर खान्नँ, नियुक्तिका लागि धाउँदिनँ, आफैँले केही गर्छु ।’
नेपाल फर्कनुको अर्को कारण पनि छ । विदेशमा रहेको अघिल्लो पुस्ता धेरै नेपाली अहिले पछुताइरहेको उनले देखेका छन् । ‘बुढो भएपछि पछुताउनु नपरोस् भनेरै म समयमै फर्किएको हुँ, कतिपय पछुताइरहेको मैले देखेको छु । उहाँहरूले मैले नेपालमै याेभन्दा बढी गर्न सक्थेँ, गर्न पाइनँ भन्ने भएको देख्छु । ‘
कसरी फर्काउने ?
विदेशमा रहेका शिक्षित वर्ग, वैज्ञानिकलाई, अनुसन्धानकर्तालाई फर्काउन सरकारका तर्फबाट विभिन्न चरणमा कार्यक्रम अघि सारिए । फर्क-फर्क वैज्ञानिकका नारा घन्काइएयो तर, प्रायः असफल भए । उत्तम भने भावनाको भरमा कोही नेपाल फर्किएर आए पनि पछि फेरि फिर्ता हुने बताउँछन् ।
उनले आफूजस्तै वातावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तनलगायत क्षेत्रमा पढेकाका लागि नेपालमा काम गर्ने वातावरण ठीकै भए पनि अन्य ठूला ल्याब चाहिने विधामा पढ्ने धेरैका लागि सहज अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि सम्पूर्ण वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने स्राेत अर्थात् लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । हुन त नेपालमा पैसा नै नभएको कहाँ हो र ? परामर्शदाताकै नाममा यहाँ एउटै गाउँपालिकाले करोड रकम सकेका छन् भने मन्त्रालयमा त यस्ताे रकम कति हाेला ?
नेपालमा विज्ञान प्रविधिबारे छुटेका कुरा
अमेरिकामा पनि पीएचडी गरेको व्यक्तिले पोस्ट डक्टरेट गर्दा वार्षिक ५०/६० हजार डलरकाे हाराहारीमा तलब हुन्छ । परामर्शकै नाममा एउटा गाउँपालिकाले दराजमा थन्क्याएर राख्ने रिपोर्टका लागि करोड खर्च गरेको सन्दर्भमा उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दा एउटै नगरपालिकाले दुई जना अमेरिकामै पीएचडी पढेका विज्ञलाई बाेलाएर त्यहाँकै तलब दिँदा पनि एक वर्ष पाल्न सक्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा सिकाइको क्षमता पनि बढ्ने बताउँछन्, उनी ।
उनका अनुसार वैज्ञानिक संस्कार निर्माण, सहकार्यको वातावरण र अध्येताका जागिरको सुरक्षामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । उनीहरूका बालबच्चा पढ्ने स्कुलहरू राम्रा हुनुपर्‍यो ।
कुनै अनुसन्धानकर्ता अर्थात् उच्च शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिलाई कम्तीमा चार वर्षको राेजगारी सुरक्षा गर्न आवश्‍यक रहेको उनी बताउँछन् ।
विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई हालका जस्ता बाेलाएर नास्टमा सीमित गर्न नहुने, जता पनि जान सक्ने, योजना आयोग, नीति प्रतिष्ठान वा अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा कुनै गाँउपालिकामा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न उनीहरूलाई फेलाेसिपका व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । विदेशबाट फर्कनेका लागि त्यस्ता फेलाेसिप दिऔँ न उनीहरूका रोजाइका विषयमा काम, राेजेका ठाउँमा जान पाउने ।
र, वैज्ञानिक मात्रै हाेइनन् उत्तम
उत्तम धेरै थरीका परिचयबाट चिनिन्छन्, यहाँ । कतै, अनुसन्धानकर्ता वा वैज्ञानिक हुन् । उनी कतै लेखक हुन् । उनी कतै फोटोग्राफर पनि हुन् । उनले फोटोग्राफीमा पनि थुप्रै अवार्ड हात पारेका छन् । समसामायिक हरेक विषयमा उनले आफ्नो धारणा पनि दिइरहेका हुन्छन् ।
दशक लामो समयदेखि उनी निरन्तर लेखन कार्यमा छन् । अहिले उनले राष्ट्रिय दैनिकमा पाक्षिक स्तम्भ पनि लेख्छन् । लेखनमा कसरी रुचि बस्यो भन्ने सवालमा उनी जानेको कुरा बाँड्ने भन्ने ध्येय आफ्नाे रहेको बताउँछन् । साइन्स कम्युनिकेटरका रूपमा काम गर्नु पेसागत मर्म रहेको उनको बुझाइ छ ।
उनी कुशल फोटोग्राफर पनि हुन् । समय भयो भने क्यामेरा लिएर बाहिर घुमघाममा निस्किहाल्छन् । त्यही साेखले आफूले देश-विदेश घुमेको बताए । ‘हालसम्म छ महादेशका लगभग ५० देश टेकिसकेँ,’ उनले कुरा टुङ्ग्याए ।
शिलापत्र अनलाइन । असाेज ५, २०७७
← प्लास्टिक : प्रयोगदेखि प्रदूषणसम्म
दक्षिण एसियामा विज्ञान कूटनीति →